Maraykanka oo Tarxiilay Sarkaal Qatari ah iyo Xaaskiisa oo adoonsan jiray shaqaalahooda! | Gaaloos.com
Home » Layaab » Maraykanka oo Tarxiilay Sarkaal Qatari ah iyo Xaaskiisa oo adoonsan jiray shaqaalahooda!
Maxkamada dalka Maraykanka ayaa amartay in dalka laga saaro sarkaal ka tirsan ciidamada Qatar oo kamid ahaa saraakiisha lagu tababarayo wadankaasi, kadib markii uu si xun ulla dhaqmay shaqaalaha guriga uga shaqeyn jiray.
Sarkaalkan oo lagu magacaabo Hassan al-Homoud oo ah 46 sano jir, ayaa u dhashay dalka Qatar.
Xaaskiisa ayaa lagu magacaabaa Saynab al-Hosani oo u dhalatay dalka Imaaraatiga. Reerkan ayaa shaqaalahooda kala yimid dibada markii ay usoo wareegeen dalka Maraykanka.
Title: Maraykanka oo Tarxiilay Sarkaal Qatari ah iyo Xaaskiisa oo adoonsan jiray shaqaalahooda!